ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Usage Print Video Screen Software
Usage Print Video Screen Software
ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မှတ်တမ်းပြုတဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ Software လေးကို တင်ပြလိုပါတယ်။ သူကတော့ Screen ကို video ရိုက်လို့ရတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ video Screen လေးနဲ့ အသံလေးနဲ့ ရုပ်လေးသွင်းထားလိုက်တော့ စာရေးပြီ မှတ်သားစရာမလိုဘဲ အခုလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မိမိရဲ့ အသံလေးနဲ့ video လေးကို ဖန်းတီးလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ညောင်းလဲသက်သာတယ်။ ပြန်ကြည့်ရင်လဲ မှတ်မိလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသုံးဝင်တဲ့ ဒီ Software လေးကိုတင်ပြလိုက်တာပါ။ ဒါပေးမဲ့ ကျွန်တော် အခုတင်ပြတဲ့ Software ကတော့ Save လိုက်ရင် File Type က exe အနေနဲ့ဘဲ Save မှာပါ။ ဒါကြောင့် SCREEN2AVI နှင့် SCREEN2SWF က ကျွန်တော် Free trails ကုန်သွားလို့ မတင်ပေးတာပါ။ SCREEN2EXE ကတော့ free ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့တစ်ခုကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နမှုနာကြည့်လို့ရအောင် ဒီမှာသွားလိုက်ပါ။ နောက် Software တစ်ခု ထပ်တင်ပါမည်။
1. အောက်ပါအတိုင်း SCREEN2EXE Software ကို Run ပြီသာနဲ့ Open လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။ မိမိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အသံပါထည့်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ၀ိုင်းထားတဲ့နေရာမှာ Include Audio ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ Screen Capture မှာ မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့ နုန်းကိုရွေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Normal,2FPS ကိုဘဲ အသုံးပြုပါတယ်။ ပြီရင်တော့ Start Recording ကို click ပေးလိုက်ပါ။
2. မိမိတို့ Dasktop ပေါ်မှာ မိမိ မလိုချင်တာတွေကို အကုန်ပိတ်ဖို့အတွက်5Seconds အချိန်းရပါတယ်။ ပြီ၇င် မိမိတို့ Desktop ပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စတင်Screen ရိုက်နေပါပြီ။ ပြီရင် မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကုန်ပြီသာနဲ့ Taskbar ပေါ်က မိမိတို့ Screen2Exe Icon ကို click လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။ မိမိလိုချင်တဲ့ ပုံစံတွေပြင်လိုက်ပါ။ပြီရင် Done ကို click လိုက်ပါ။
3. Done ကို click လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်း Save Box ကျလာပါမည်။ မိမိတို့ Output Quantity တို့ Title တို့ Description တို့ကို စိတ်ကြိုက်ရေးလိုက်ပါ။ Save ဖို့အတွက်ကတော့File နေရာက အကွက်ဘေးနာမှာ အကွက်အငယ်လေ(Borrow)ကို click လိုက်ပါ။ ပြီရင် မိမိတို့ Save ချင်တဲ့ နေရာနဲ့ File Name ကို ရေးလိုက်ပါ။ ပြီရင်တော့ Save ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် Save Now ကို ထပ် click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ Desktop ကို Screen Video ရိုက်ပြီသွားပါပြီ။ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို video အနေနဲ့တင်ပြချင်တဲ့ Blogger များအနေနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။